Yintoni iAirPort kwaye yenzelwe ntoni? | Ifakiwe | Ndisuka mac
Yintoni iAirPort kwaye yenzelwe ntoni?
Amaxesha amaninzi sifumana iimveliso iapile ukuba aziwa kakhulu kwaye umsebenzi wabo usenza sibe nomdla. Namhlanje ndikuphathele inkcazo emfutshane AirPort, ukuba iyasebenza kwaye kufanelekile ukuthenga.
1 IAirPort yiApple
1.1 Useto lweAirPort
Okokuqala kufuneka siyazi loo nto iapile into oyifunayo kukuba zonke izixhobo zakho zinxibelelana ngaphandle kwengxaki njengoko sele sibonile nge I-AppleTV kwaye sisixhobo esibaluleke kakhulu esisisebenzisa kuzo zonke izixhobo zethu, iCloud Ngenxa yoko iapile Kuye kwaxhalaba ukuze kumakhaya nakwiiofisi zethu sinakho ukusebenzisana nezixhobo zangaphandle.
Njengoko sibona emfanekisweni, AirPort Yenziwe ngamagalelo ama-5 kunye neqhosha elincinci. Izibuko lokuqala, elibekwe ngasekhohlo komfanekiso, lilungiselelwe qhagamshela intambo yombane yangoku, elandelwa ngu uqhagamshelo lwe-ethernet apho siya kuthi siqhagamshele khona intambo ukusuka kwimodem yethu eqhelekileyo kwi AirPort kwaye ke siya kumka AirPort ukulawula inethiwekhi yethu ye-intanethi.
Ezi zibuko zilandelayo ze-ethernet ziya kuba simahla ukunxibelelana nekhompyuter ngentambo. Apha ngezantsi sifumana Izibuko le-USB eya kuthi isivumele ukuguqula umshicileli oqhelekileyo ube yifayile I-AirPrint Oko kukuthi, ukuba umshicileli wakho uqhagamshelwe kuphela ngentambo ye-usb, konke okufuneka ukwenze kukuyiqhagamshela I-AirPort, uyiqwalasele ukusuka kwifayile ye- IMac kunye ne-voila, ngoku unokuprinta ngaphandle kweengcingo nakweyiphi na iDevice.
Omnye wemisebenzi endiyithanda kakhulu kukuba ngentambo yeaudiyo okanye imveliso encedisayo edityaniswe nesandisi okanye isixhobo sesandi sinokuphinda sivelise izixhobo zethu.iphepha ngaphandle kwentambo ukusuka naphi na emakhayeni ethu okanye apho sixhume khona iAirPort, kanye njengoko sisenza kwi I-Apple TV, sikhetha kuphela AirPort kwaye ulungile!
Okokugqibela, iqhosha elincinci esilifumana ekunene konke kukuqala kwakhona i-Aingxelo ukuba sineengxaki kwaye sifuna ukuyicwangcisa kwasekuqaleni.
Ukucwangciswa kwayo kulula kunokuba ucinga. Kwi IMac kufuneka ukhangele Ukusetyenziswa kwe-AirPort kwaye iya kubonakala kuwe kwangoko ngelixa zixhobo iOS Kuya kufuneka ukhuphele usetyenziso lwasimahla u-Aingxelo de la Ivenkile yosetyenziso Kwaye uya kuba nayo yonke into ngaphakathi kwesicelo ukuyimisa.
Njengoko sibona emfanekisweni I-AirPort Express Iya kusivumela ukuba siqwalasele inethiwekhi yabucala, efihliweyo okanye eyindwendwe ye-Wi-Fi ukuze sikwazi ukulungiselela izixhobo ezinxibelelana nenethiwekhi yethu, ukongeza ekubeni sikwazi ukumisela iindidi ezimbini zebhendi yenethiwekhi 2,4 IGz izixhobo zangaphambi kwe- iPhone 4s kunye neqela le 5 IGz izixhobo kamva.
Ukongeza, omnye wemisebenzi ephambili kukuba yandisa umqondiso we-wifi Kwaye uya kwamkela ngakumbi naphi na apho ukhoyo ngesixhobo sakho esixhunyiwe.
Ngaphandle kwe I-AirPort Express sinaye Ixesha eligqithisileyo leCapsule ukuba kunye nemisebenzi efanayo esele ibonwe, yongeza ezintathu ezintsha kwaye zinomdla. Eyokuqala kukuba ibandakanya i-hard drive ukusuka kwi-1 TB ukuya kwi-3 TB eza kuthi rhoqo ixhase sonke IMac
Okwesibini, ukuba sidibanisa no-AirPort ngokugqithileyo i-usb hard drive yangaphandle sinokwabelana ngolwazi lwakho ngaphandle kwamacingo kuzo zonke izixhobo zethu ezixhumeke kwinethiwekhi
Kwaye okokugqibela, siya kuba namazibuko e-ethernet ngakumbi kunye nokugubungela ngokubanzi inethiwekhi yethu ye-wifi kuba singabeka enye kwigumbi lokuhlala enye kwigumbi lethu kwaye Isikhululo senqwelomoya ngokugqithileyo iyakuphinda kwaye yandise umqondiso wenethiwekhi yethu ye-Wi-Fi ukusuka Isikhululo senqwelomoya.
Ngale nto sele ithethiwe, kum ngokwam ukuthengwa kwayo lukhetho olufanelekileyo ukuba ikhaya lakho okanye indawo yakho yokusebenza inkulu kwaye i-intanethi yakho ayinaso isibonakaliso esihle se-Wi-Fi, nokuba ungomnye wabo bangazithandiyo iintambo kakhulu lukhetho olufanelekileyo lokuba umculo wakho, umshicileli kunye neefayile kwabelwane ngazo rhoqo ngaphandle kokukhathazeka ngokudibana njalo njalo iapile uhlala efuna ukusinika intuthuzelo nangaphezulu koko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Yintoni iAirPort kwaye yenzelwe ntoni?
Ibhokisi kaJose luis rojas sitsho
Molo inqaku elilungileyo, kodwa into endifuna ukuyazi ukuba ihlala ixhonywe kwi-router okanye hayi. Kwaye ukuba ndinokwenza nelifu ukufikelela ngaphandle
Phendula ibhokisi kaJose luis rojas
UDavid marsinyach sitsho
I-Airpot Expres kufuneka idityaniswe kwi-router, nge-Wi-Fi, okanye kufuneka ibuyisele ngqo i-router ebonelelwe yinkampani.
Phendula kuDavid Marsinyach
luis munoz sitsho
Phendula u luis muñoz
Ndifuna ukuyisebenzisa ukwandisa ukhuselo lwe-wi-fi ekhaya. Ngaba ukubuyela kwakhona okuphambili kufuneka kube yiapile nayo?
Eyona mifanekiso mihle yeapps ye-iPhone okanye ye-iPad
IPlanethi eBlue, yongeza imifanekiso yesatellite yoMhlaba njengemvelaphi yedesktop